Fifidianana filoham-pirenena : Any amin’ny faran’ny volana oktobra any -
AccueilRaharaham-pirenenaFifidianana filoham-pirenena : Any amin’ny faran’ny volana oktobra any
20/06/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Taorian’ny fivoriana indroa miantoana, izay notontosain’ny governemanta sy ny vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana ny sabotsy 16 jona sy ny 18 jona, dia fantatra izao fa efa natolotrin’ny CENI ny governemanta omaly maraina ireo daty miisa telo ahafahana manatanteraka ny fifidianana. Ny harivan’ny afakomaly sy ny omaly maraina moa dia mbola nisy ny fandinihana farany izay notontosain’ ny CENI taorian’ny fihaonana tamin’ny governemanta, ary namoahana ny soso-kevitra na daty tokana ahafahana manatanteraka ny fifidianana filoham-pirenena izay io natolotra ny governemanta io. Raha ny daty mazava aloha dia nanambara ny teo anivon’ny CENI fa ny governamanta no manana ny safidy, ka tsara rehefa avoakan’izy ireo izany dia samy mahalala kosa ny rehetra, ankilany anefa nisy ihany ny tombatombana nomen’ ireo avy amin’ ny CENI fa manodidina ny faran’ ny volana oktobra hatrany amin’ny fiandohan’ny volana novambra izany soso-kevitra mikasika ny datin’ny fifidianana izany. Nanamarika kosa anefa ny CENI fa mety misy ny fanakisahana ny daty izay hotanterahin’ny governemanta, antony nilazan’izy ireo fa mety ho any amin’ny fiatombohan’ny volana novambra any ho any ihany koa no mety hanatanterahana io fifidianana filoham-pirenena io.
Any amin’ny governemanta tanteraka izany izao ny baolina, izy ireo izay mila mijery ireo fepetra maro ahafahana manatontosa ny fifidianana miainga amin’ ny soso-kevitry ny birao mahaleo tena misahana ny fifidianana. Nambaran’ny ceni ihany koa fa nohajaina avokoa ny fanapahana izay navoakan’ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana nandritra ny famolavolana ny soso-kevitra amin’ny datim-pifidianana izay natolotra ny governemanta. Anisan’izany hoy ny CENI ny fanatanterahana ny fifidianana mialohan’ny fotoana, ary anatin’ ny fotoanan’ny main-tany. Noho izany na dia eo aza ny soso-kevitra izay mivoitra etsy sy eroa dia ny lalàna no niaingan’ ny CENI raha ny fanazavana izay azo avy amin’izy ireo. Hatreto ihany koa anefa mbola tsy nisy ny fifanarahana hafa mikasika ny datim-pifidianana izay, ary hiarahan’ny rehetra mahalala rahateo fa tsy azo ivalozana ny fanapahana izay navoakan’ny fitsarana avo momban’ ny lalàm-panorenana, ka noho izany dia io tokoa no arahin’ny rehetra amin’izao fotoana izao.
Mitohy hatrany ny fiaraha-miasa eo amin’ny firenena Rosianina sy ny zandarimariam-pirenena, hiadiana eo amin’ny resaka tsy fandriam-pahalemana. Nohamafisina tamin’ny alalan’ny fitsidihana ara-pomba-panajana nataon’ny mpanolotsainan’ny Masoivohon’ny Rosia eto Madagasikara, André Tchirkov, ny sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena, ...Tohiny
Fanamby napetraky ny SEG : Tratra ny tanjona
Fankalazana ny faha- 50 taonan’ny FJKM : Tsy nanatrika ny fiaraha-misakafo ny filohan’ny fankalazana